Fiarabe niharan-doza :: Kamiao nitondra mpandeha nahafaty olona efatra • AoRaha
Fiarabe niharan-doza Kamiao nitondra mpandeha nahafaty olona efatra
Olona efatra namoy ny ainy, telo ambin’ny folo hafa naratra mafy. Ireo no vokatry ny loza nahazo ny kamiao iray nitondra mpandeha am-polony maro, tany Antsahanitera­ka-Tsaratanàna, any Boriziny, afak’omaly.
“Ahiana ho antony teknika nahazo ny fiara no nahatonga ny loza kanefa misy ny antsirambin’ny mpamily”, araka ny tatitra avy amin’ireo mpitandro filaminana.
Nivory maika ireo manampahefana any Boriziny, omaly nandinika io loza io. Tapaka tamin’izany fa: “tsy azo atao intsony ny mitondra mpandeha amin’ny kamiao amin’ny lalana mampitohy an’i Boriziny sy Marovato izay nisy ity loza ity. Izay mpamily minia mandika io fepetra io dia ho voasazy avy hatrany”. “Mety hiafara amin’ny fisintonana ny taratasy fahazoany mamily fiarakodia mihitsy ny sazy”, hoy ny tati-baovao avy any an-toerana, omaly.
Nisy ny fandraisana andraikitra nataon’ireo manampa­hefana mamaha ny olan’ireo mponina amin’ny fitaterana. “Hisy fiara mpitatitra olona miisa roa hanomboka amin’ny zoma izao”, hoy hatrany ny loharanom-baovao.
Kaominina Miandrivazo :: Leo fitantanana tsy mahomby ireo mponina